Body နဲ့ပတ်သက်ပြီး Follow လုပ်ထားသင့်သော အမျိုးသမီးတွေရဲ့ Instagram များ…. – FemaleWear.net
Body နဲ့ပတ်သက်ပြီး Follow လုပ်ထားသင့်သော အမျိုးသမီးတွေရဲ့ Instagram များ….
ပိန်တယ် ဝတယ် မလှဘူး လှတယ် လို့ပြောခံနေရတာ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အမျိုးသမီးတွေကို တော်တော်လေးစိတ်ဒုက္ခပေးနဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ခေတ်မီတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ငွေကြေးပြည့်စုံနေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားနည်းချက်မရှိအောင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ ရပေမယ့် ငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့သူတွေအနေနဲ့ body shaming ကိစ္စက အတော်လေးကို စိတ်ဓာတ်ကျစရာကိစ္စပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုလူတွေရဲ့ကြားမှာ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ဖြတ်သန်းရပ်တည်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
aaaaaand the current mood is…. stand in your power. speak your truth. do the damn thing. @michelesuits x @onlo_beauty x @asos_loves_curve x @asos
A post shared by Dana Falsetti (@nolatrees) on Dec 6, 2017 at 10:00am PST
Rolling into 2018 the same way I rolled into 2017: ignoring the influx of advertisements for “new year, new you!!” and quick-fix diets and teatox gimmicks and gym memberships for the dream body you always wanted. Instead I’m paying close attention to how I feel, making necessary changes to my discretion, and living on my terms with the knowledge that I am much more than my body or anybody’s opinion of it. I honestly have too much to offer and too much important work to do to spend time worrying about catching up to society’s standards that are in place to drain me of my resources (mental, financial, emotional) and keep me from shining with all the light I already am. If I were still doing that, I wouldn’t be here right now. ?@jacquelynpotter
A post shared by Dana Falsetti (@nolatrees) on Dec 27, 2017 at 9:54am PST
သူမကတော့ အရမ်းဝတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် Yoga ဆရာမတစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဝပေမယ့် အဆီမရှိဘဲ ကျန်းမာတဲ့အသားရေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ဒီနေ့ထိ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Follower 309K နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့။
If you’ve ever felt not good enough. Not pretty enough. Not perfect enough. If you’ve ever felt like you don’t belong and the the world is against you, this is for you. For anti bullying week, I’ve shared my story and why I made #youlookdisgusting. I hope it can help those of you inasimilar situation, or those who feel like I did. Just remember you are good enough, you are strong enough and you can do this ❤️. To watch the full video ➡️ LINK IN BIO ⬅️
A post shared by Em Ford (@mypaleskinblog) on Nov 17, 2017 at 10:22am PST
GLAM AF ? FUTURISTIC MAKEUP TUTORIAL ⚡️ Link in bio to watch ?? Dress: @cutecircuit Eyeshadow: @marcbeauty eye-conic eyeshadow Foundation: @maybelline matte & poreless Inspired by @bladerunnermovie #bladerunner2049 ? by @wandergasm
A post shared by Em Ford (@mypaleskinblog) on Oct 19, 2017 at 1:17pm PDT
သူမကတော့ မိတ်ကပ်ပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ လောက်မှာ ဝက်ခြံတွေများစွာရှိတဲ့ သူမရဲ့ မျက်နှာကို မိတ်ကပ်ပြင်ပြပြီး before and after နဲ့ Youtube မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး သူမရဲ့ ရိုးသားမှုကြောင့် လူသိများကျော်ကြားလာခဲ့တာ ဒီနေ့ထိ Follower 1Million ကျော်နဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။
“Like uh, when am i seeing u again” ??
A post shared by ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) on Jan 1, 2018 at 3:14pm PST
Stepping into the New Year like “Hello, future Accomplishments? Nice to meet you!” ?????
A post shared by ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) on Dec 29, 2017 at 7:18am PST
ဒီတခါအမျိုးသမီးကတော့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ လူအများနှာခေါင်းရှုံ့စရာ ခရုသင်းစွဲနေတဲ့ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရပေမဲ့ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတာ အင်မတန်မှ ချီးကျူးစရာကောင်းလှပါတယ်။ သူမအတွက်တော့ Fashion တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီး ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ် unique တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချပြီး အခုဆိုနာမည်ကြီး Model တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီး Follower 2.8 Million အခိုင်အမာရထားပါတယ်။
Milk Chocolate Red Carpets? #TBT #BlackGirlMagic @imgmodels
A post shared by PRECIOUS LEE (@preciousleexoxo) on Dec 14, 2017 at 11:37am PST
CurveNation? #tbt #2015 #curves for @galore ?by @anastasiagphoto ?by @jnavaromakeup ?by Moi?
A post shared by PRECIOUS LEE (@preciousleexoxo) on Sep 21, 2017 at 6:16pm PDT
သူမကတော့ plus size အမျိုးသမီးတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်တဲ့ Lane Bryant Brand ရဲ့ ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်ဟာလည်း plus size တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် swimsuit တွေဝတ်ပြီး သူမရဲ့ plus size ကို unique တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီး black Plus size model တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ Follower 87.5k နဲ့. ရပ်တည်နေပါတယ်။
Forever comfy season ? Wearing: @fashionnovacurve Shot by: @shevahh #fashionnovacurve #jumpsuit #fashion #ootd
A post shared by Nadia Aboulhosn (@nadiaaboulhosn) on Jan 2, 2018 at 2:45pm PST
⏳ Looking at 2018 like….my time now. Wearing: @fashionnovacurve Shot by: @shevahh #fashionnovacurve
A post shared by Nadia Aboulhosn (@nadiaaboulhosn) on Dec 28, 2017 at 5:55pm PST
ဒီတခါသူမကတော့ Fashion blogger တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း plus size အမျိုးသမီးဆိုပေမယ့် body-confidence အပြည့်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမကို ဘယ်သူတွေဘယ်လိုဘဲပြောပြော သူမကတော့ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဝနေပေမယ့် သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆီတွေမရှိအောင် ကျန်းမာအောင်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Follower 532k နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။
A year ago today when I presented to you my Guiness world record! I am super proud to hold this record, the inner child in me is so pleased. I grew up reading this book, I even tried breaking some of my own records wanting to be in this book. It is amazing to be valued and celebrated beingaBearded Lady. I am proud to hold this amazing record ? I hope those who read or see my record can take away positivity, inspiration and realise that no matter who you are or what you look like, you are officially amazing! I present to you my record as ‘The youngest women withafull beard’ #beardedlady #harnaamkaur #guinessworldrecordholder #guinessworldrecord
A post shared by Harnaam Kaur (@harnaamkaur) on Sep 8, 2017 at 9:39am PDT
Everyone asks me how I get my beard so buff! Well my lovelies…the secret is to feed and nourish your hair with natural oils everyday; it’s as simple as that ❤️ @iaincrockart took this wonderful image of me for my very own Hair Elixir promo with @captainfawcett Yes! I am wearing my hair elixir in my beard, and look at how great Sundri (my she beard) looks ??? You can now buy my Hair Elixir from @captainfawcett website under the ‘beard oil’ option at www.captainfawcett.com Let me know what you think of it! Use it both in your hair, beard, body, your soul, cat and dog ???? #harnaamkaur #captainfawcett #hairelixir #beardedlady #hairoil #pcos
A post shared by Harnaam Kaur (@harnaamkaur) on Aug 18, 2017 at 7:06am PDT
သူမကတော့ အရမ်းထူးဆန်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငယ်ရွယ်တဲ့ မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူမအသက် ၁၆ နှစ်ကတည်းက ပါးသိုင်းမွှေးတွေရှိနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူမကတော့ body confidence အပြည့်ရှိတဲ့ model တစ်ယောက်အဖြစ် လူသတိထားမိပြီး Instagram မှာ popular ဖြစ်နေသူတစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Follower 99.6kရှိနေပါတယ်။
A post shared by Stefania Ferrario (@stefania_model) on Jan 5, 2018 at 1:52pm PST
Cheers to the New Years! ?
A post shared by Stefania Ferrario (@stefania_model) on Jan 1, 2018 at 12:07am PST
သူမကတော့ Australian Model တစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ကင်ဆာကြောင့် တိုနေတဲ့သူမရဲ့ ဆံပင်ကြောင့် ခပ်မိုက်မိုက် style ကိုပြောင်းလဲပြီး confidence အပြည့်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ Plus body ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း အခက်ခဲတွေကြားထဲက ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူမဟာ model တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့ပြီး Instagram Follower 544kနဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။
အသက်ကြီးပေမယ့်မပျက်စီးသေးဘူးဆိုတာ ဒါမျိုးပါနော်။ သူမကတော့ Jewellery Designer တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Instagram Superstar တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ Instagram မှာတော့ Fashion နဲ့ ခရီးသွားပုံတွေကို မျှဝေလေ့ရှိပြီး အသက်အရွယ်အရ ရရှိလာတဲ့ ဆံပင်ဖြူတွေကို Fashion အဖြစ်ခပ်မိုက်မိုက်အသုံးချထားတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမနဲ့အသက်အရွယ်တူတွေကိုသာမက ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေထက်ကို တက်ကြွဖျက်လက်နေတာတွေ့ရတာ သူမရဲ့အမှတ်သားတစ်ခုလို့တောင် ဆိုလို့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Instagram Follower 159k နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။
A more interesting shot would have been one when earlier in the day I was climbing onto the roof of my car to reach the sprigs of Jacaranda, which now are in my hair ??? Anyway, you get the idea ⚛️ Not the perfect circle but I did my best ☯️ ?? If you wanna see the car it car features over on @mywrinklesaremystripes ⛺️?⛺️#fff Btw this is #whatiwore to the #australianfashionlaureate awards the other night, dress by @romancewasborn Big congrats to @dionlee #Laureate10 Thanks to all involved, especially Mother Nature, who can’t be beat ????? #saramai #sarahjaneadams
A post shared by Sarah Jane Adams (@saramaijewels) on Nov 10, 2017 at 10:38am PST
Nurture nature ?????#sarahjaneadams #saramai #mywrinklesaremystripes @mywrinklesaremystripes for more like this ?
A post shared by Sarah Jane Adams (@saramaijewels) on Dec 17, 2017 at 11:09am PST
Some days I wake up and don’t know where I am ??? Then I remember ? Here ? In this body ?? Giving abundant thanks ?#sarahjaneadams #saramai #mywrinklesaremystripes ?@advancedstyle more questions than answers over on @mywrinklesaremystripes
A post shared by Sarah Jane Adams (@saramaijewels) on Nov 25, 2017 at 4:21am PST
၂၀၁၈ ရဲ့ Fashion ကိုဝင်ရောက်လာနိုင်သော အရောင်
Golden Globes ရဲ့ Red Carpet ပေါ်မှာ အရမ်းလှနေသော သရုပ်ဆောင်များနဲ့ ပွဲတက်ဝတ်စုံများ…..